Taariikh Cusub Oo U Bilaabantay Haweenka Sacuudiga
(Hadhwanaagnews) Saturday, January 13, 2018 05:09:11
Dalka Sacuudiga ayaa dhowaanahan si qunyar socod ah ugu ogolaanaya in dumarka ay helaan xuquuq dheeraad ah taas oo jawaab
Dumarka Sacuudiga waxay bishan dhigayaan taariikh ka dib markii loo fasaxay in ay garoomada tagi karaan oo ay daawan karaan ciyaar kubadda cagta ah. Waa markii ugu horaysay taariikhda.
Waxay daawasho u tagi doonaan saddexda garoon ee dalka ugu waawayn ee ciyaaraha lagu qabanayo. Dumarka ugu horreeya waxay tagi doonaan garoonka Boqor Fahad oo ku yaalla caasimadda Riyadh oo ay kuwada ciyaari doonaan kooxaha Al-ahli iyo Al-Batin. Waxay ku tartamayaan horyaalka koowaad ee Sacuudiga.
Dalka Sacuudiga ayaa dhowaanahan si qunyar socod ah ugu ogolaanaya in dumarka ay helaan xuquuq dheeraad ah taas oo jawaab u ah dalabaadka dadka u dooda xuquuqda dumarka.
style="font-size:16px;">Arrintan oo khusaysa dumarka qaangaadhka ah ee aan lala socon iyo kuwa carruurtoodu la socoto waxaa loo ogolaaday in ay galaan saddex garoon oo ku yaalla magaalooyiin waawayn sida Riyadh, Jiddah iyo Dammaan. Sidoo kale, Sacuudiga wuxuu todobaadkan marti gelin doonaa tartankii ugu horeeyay ee dumar ay wada ciyaaraan.
Bishii Nofembar ee 2017kii, dalka wuxuu qabtay tartanka dumarka ciyaaraha kubadda koleyga ee jaamacadaha ka socda. Waxayna ku ciyaareen magaalada Jiddah, waxaa daawaday in ka badan 3,000 oo dumar. Dumarku waxay ciyaaraha ka daawayn doonaan qaybo si gaar ah loogu diyaariyey haweenka iyo qoysaskooda. Taasi micneheedu yahay in dumarka tagaya garoomada ay la fadhiisan doonaan caruurta ayna ka fogaanayaan ragga.
Waxaa sidoo kale la calaamadeeyay goobaha loo diyaariyay dumarka aanay la soconin nin ka mid ah qoyskooda.
Tallaabadan waxay qayb ka tahay isbedelka arrimaha bulshada lagu samaynayo ee uu wado dhaxal sugaha boqortooyada Amiir Maxamed bin Salmaan, kaas oo ballan qaaday in dalka uu isbedel ku samaynayo oo sheegay inuu yahay qorshihiisa tiigsiga 2030ka.